JIRO SY RANO : Tsy mbola voavaha tanteraka ny olana na nisy aza ny andraikitra efa noraisina
Vita ny milina lehibe miisa efatra an’ny “Axaf Power” mamatsy herinaratra ny Orinasa Jirama. 25 octobre 2019
Tonga ihany koa ny solika hampihodinana ny herinaratra eto Antananarivo. Ireo no anisany ezaka tsy maintsy nirosoan’ny orinasa Jirama manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny nampimenomenona vahoaka nandritra ny andro vitsivitsy lasa izay. Nitafa tamin’ny mpanao gazety izy ireo omaly ary nilaza fa tsy hisy intsony ny delestazy na fanapahan-jiro iniana atao. Olana ara-teknika noho ny fahasimban’ny fotodrafitrasan’ny Jirama sisa no mahatonga ny jiro any amin’ny faritra sasany mbola tapatapaka, hoy ny fanazavana.
Saika hita nanerana ny faritra rehetra teto an-drenivohitra ny fahatapahan-jiro lava. Betsaka ny olon-tsotra sy orinasa no nimonomonona sy nampiaka-peo mahakasika ity tranga ity. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra teo anivon’ny orinasa Jirama, omaly, dia ny fahasimban’ny milina lehibe miisa efatra tantanan’ny orinasa “Axaf Power” ao Mandroseza sy ny fahataran’ny fahatongavan’ny famatsiana solika teo anivon’ny Orinasa no nahatonga io fahatapahan-jiro io. Vokatr’izany, tsy maintsy niroso tamin’ny fampiharana ny fanapahan-jiro iniana atao na Delestazy isam-paritra izy ireo. Tamin’ny afak’omaly sy omaly ihany anefa no nampiharina io fanapahan-jiro niniana natao io, raha ny fanazavan’ny talen’ny seresera eo anivon’ny Orinasa Jirama, Andriamampionona Francesca.
Tsy misy ifandraisany amin’ny olana ara-tsolika eto Antananarivo
Nanamafy ity talen’ny serasera ity fa tsy misy ifandraisany amin’ny olana ara-tsolika eto Antananarivo amin’izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro eo anivon’ny Orinasa Jirama. “Tsy fahatomombanana sy fahasimbana milina miisa efatra tao amin’ny Axaf Power no nahatonga ny olana. Resaka ara-teknika mihitsy izany. Efa mivaha tanteraka ny mahakasika izay olana ara-teknika izay satria efa miasa ny roa amin’ireo milina ireo nanomboka omaly maraina, ary ny roa hafa kosa dia efa an-dalam-panamboarana. Menaka mavesatra no mampihodina ny milin’ny Jirama etsy Mandroseza. Ny fahataran’ny famatsiana io menaka mavesatra io no nahatonga ny olana sy ny fahatapahan-jiro niniana natao. Raha toa ka mbola misy ny faritra misedra fahatapahana amin’izao fotoana izao dia olana ara-teknika sy vokatry ny toetr’andro fa tsy delestazy intsony“, hoy hatrany ny talen’ny serasera Andriamampionona Francesca.
Mila fanapahan-kevitra hentitra…
Na teo aza anefa ity fanambaràna nataon’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Orinasa Jirama, omaly maraina ity dia tsikaritra hatrany fa mbola nandrakotra an’Antananarivo sy ny manodidina ny fahatapahan-jiro hatramin’ny omaly hariva. Mila mandray fanapahan-kevitra hentitra, araka izany ny mpitantana sy ny tompon’andraikitra voakasika mba tsy hisy fiantraikany any amin’ny fiainam-bahoaka ny tranga tahaka izao. Maherin’ny 80 isan-jaton’ny mponina eto an-drenivohitra no mampiasa herinaratra ary misy mihitsy aza no mivelona amin’izany raha tsy hilaza afa-tsy ny mpanao sakafo sy ny mpivarotra mila mampiasa vata fampangatsiahana.